သင်၏နောက်ဆုံးကင်ပိန်းကိုသင်စမ်းသပ်ခဲ့သလား။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 7, 2011 သောကြာနေ့, မတ်လ 1, 2013 Douglas Karr
ယနေ့ငါ Best Buy Reward Zone မှလှပသောအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအီးမေးလ်တွင်ခိုင်မာသည့်ကမ်းလှမ်းချက်များပါရှိသည်။ 16Gb SD Card ကိုဒေါ်လာ ၂၄.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
ငါ link ကိုနှိပ်ပြီးဆိုင်းအင်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ငါဆိုင်းအင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါ2browser ကိုစမ်းသပ်ပြီး, ငါ့အကောင့်နံပါတ်နှင့်ငါ့အီးမေးလ်လိပ်စာကြိုးစားခဲ့ ... နှင့်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းမပြုနိုင်။ တွစ်တာကိုတိုင်တန်းပြီး @Coral_BestBuy ကငါ့ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူမကရှင်းပြသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ဆုသည်ဇုန်အကောင့်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော်လည်း Best Buy တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Reward Zone နံပါတ်ကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကောင့်နှစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေမည်ဟုထင်ရသည်။ ငါတင်ပြပြီးတာနဲ့ဒီစာမျက်နှာဟာမီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့နံပါတ်နဲ့အတူလန်းဆန်းစေတယ်။ အမှားမက်ဆေ့ခ်ျမရှိပါ ငါတိုးသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုပြန်ရနိုင်ဘူး။ ငါအရှုံးပေးလိုက်တယ်
လူအများစုသည်ကျွန်ုပ်မစွန့်လွှတ်မီကပင်အရှုံးပေးခဲ့ကြသော်လည်းမည်မျှခက်ခဲကြောင်းကျွန်တော်သိချင်ခဲ့သည်။ ဒီမှာပြproblemနာတကယ့်ပြisနာကအီးမေးလ်အဖွဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရလဒ်အချို့ရရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပြသနာသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကိုဤမျှလောက်များစွာသောအဆင့်များကိုဖြတ်ကျော်ရန်လိုအပ်ခြင်းသည်မည်သည့်စားသုံးသူကိုမဆိုစိတ်ပျက်စေသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်၏အပိုခြေလှမ်းတိုင်းသည်သင်၏စကားဝိုင်းများကို ၅၀% လျှော့ချလိမ့်မည်။ ငါဒီဂဏန်းကိုတိုးအောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့တကယ့်ရာခိုင်နှုန်းကပိုဆိုးနေသေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်စေရန်သင်၏သုံးစွဲသူအားပြောင်းလဲခြင်းသို့ရိုးရှင်းသော၊ သတိပညာရှိသောလမ်းကြောင်းများပေးရမည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်ခြင်း၊ စနစ် ၂ ခုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူအားရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဒါတွေအားလုံးကို ဦး ဆောင်လမ်းပြ စျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာ.
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်သရုပ်ပြခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း (သို့) ၀ ယ်ရန်အတွက်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ရန်နောက်ဆုံးသောကာလသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ငါအခါတိုင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားနှင့်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှားများကိုရှာပါ။ တကယ်တော့ငါ opt-in အီးမေးလ်ကိုစဖွင့်တဲ့အခါမှာစာမျက်နှာမှားကိုညွှန်ပြနေတဲ့ကျွန်တော့် site မှာ subscribe link တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ Ouch!
WordPress နှင့်အီးမေးလ်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်နှင့် My Campaign Pro